जीवनसाथीको रोजाइमा विपनाको सपना जस्तो अन्तर्कथा access_timeअसार १३, २०७९
१२ वर्षपछि खोलो पनि फर्किन्छ भन्छन् । अधिवक्ता विपना योगीको जीवनमा पनि त्यस्तै भएको छ । श्रीमान् बितेको १२ वर्षपछि उनले हालै कविन्द्र* श्रेष्ठसँग दोस्रो घरजम गरेकी छन् । अहिले विपनालाई आफ्नो जीवन भोगाइ सपना जस्तो लागेको छ । ३४ वर्षकी विपना १५ वर्षकी एक छोरीकी आमा ह...
केटीहरूलाई ट्युसन पढाउन मान्दैनथे नारायणमान विजुक्छेँ access_timeअसार १३, २०७९
नारायणमान विजुक्छेँ ‘रोहित’ शिक्षक सेवामा लाग्दा इमान्दारीपूर्वक लागे । उनले जुनजुन स्कुलमा पढाए, उनी एउटा इमानदार शिक्षकका रूपमा दरिएका थिए । उनी घरमा आएका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने गर्थे । उनी शिक्षा सेवालाई जीवनको एउटा उपलब्धि ठान्थे । यति हुदाहुद...
एक जोर कम्युनिष्टको सङ्घर्षमय जीवन access_timeअसार १२, २०७९
नारायणमान विजुक्छेँ ‘रोहित’ सानैदेखि रसिक थिए । उनी बाल्यकालदेखि नै मिलनसार र त्यति नै भद्र पनि थिए । घरको जेठो छोरो भएकाले एकातिर घरको व्यवहार थाप्लोमा पर्नु, अर्कातिर कम्युनिस्ट भएर राजनीतिमा सक्रिय हुनु एवम् शारीरिक रोगको उपचारपछि आआनो स्वास्थ्यलाई जोग...
नेपाली पोसाकले आत्मनिर्भर बनाउने कुन्तीको सपना access_timeअसार ११, २०७९
विगत २ वर्षदेखि समाजसेवी कुन्ती पोखरेल आफ्नो थप अर्को परिचय थप्ने प्रयासमा छिन् । त्यो हो स्वदेशी तयारी पोसाक उद्यमी । यद्यपि अघिल्लो वर्ष मङ्सिरमा उनको एउटा पहिचान थपिएको थियो–राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा सर्वाधिक मत पाएर निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको । सामाजिक...
हिमालयन जाभाः दुई दशकको यात्राले बदल्यो नेपालको ‘कफी कल्चर’ access_timeअसार १, २०७९
तपाईं एक दिनमा कति पटक कफी पिउनु हुन्छ ? अनि साता वा महिनामा कति पटक कफी पिउनु हुन्छ ? आजका दिनमा यो प्रश्नको सजिलो उत्तर हुन सक्छ– जति पटक मन लाग्यो, त्यति पटक र जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ । किनकि, आज प्रत्येक चोक–चोकमा कफी सप पाइन्छ । हरेक पाइलामा...
‘जब मैले वेद पढेँ, दलितले छोएको खान थाले’ access_timeजेठ २१, २०७९
जेठ २१ अर्थात् ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस’ । नेपाल जातीय विभेद तथा छुवाछूत भेदभावमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १६ वर्ष पूरा भएको छ । यद्यपि, विभेदका घटनामा भने कमी आउन सकेका छैन । जनआन्दोलन पछिको पुनःस्थापित संसद्ले २०६३ साल जेठ २१ गते ...
स्कुलको ‘फस्ट गर्ल’ देखि ललितपुरको उपमेयरसम्म access_timeजेठ १४, २०७९
मञ्जली शाक्य बज्राचार्य ललितपुर महानगरपालिकाकी नवनिर्वाचित उपमेयर हुन् । एमालेबाट उम्मेदवारी दिएर उनी उपमेयर बनेकी हुन् । ललितपुर महानगरको समृद्धि, मौलिकताको संरक्षण, यहाँका बासिन्दाको खुसीबाहेक उनको अन्य कुनै लक्ष्य छैन । विद्यार्थी जीवनदेखि नै अखिल क्रान्तिकारीबाट ...
म त त्यसै भाग्यमानी access_timeजेठ १२, २०७९
सुरुमा मैले सगरमाथा आरोहणको कुरा गर्दा कसैले पत्याएन । यसले गफ दियो भन्ने धेरै थिए, तर मैले सगरमाथा चढेर देखाएँ । काठमाडौंबाट निस्किएदेखि नफर्किदासम्म आरोहणको यात्रा एकदमै सुखद रह्यो । मसँग जति पनि शेर्पा साथीहरु थिए । तिनीहरुको साथ कहिलै बिर्सन सक्दिन । सब...
शताब्दी पुरुष जोशीः कम्प्युटरका हार्डडिक्स access_timeबैशाख ३०, २०७९
नेवार जातिलाई पहिला ‘नेवाल’ भनिन्थ्यो । क्रमशः ‘ल’ हटेर यो जाति नेवाः या नेवार हुन थाल्यो । यो जातिले नेपाली माटोमा प्राचीनकालदेखि नै जरा गाडेको हो । नेवार काठमाडौँ उपत्यकाका आदिवासी हुन् । नेपालको प्रथम राजवंश गोपालवंश हो र गो...
‘सञ्जु बैनी, तिम्रो अर्को फोटो कहिले खिच्ने ?’ access_timeबैशाख २९, २०७९
मंगलबार मेरो अफिस बिदा हो । म बिदाको दिन अलि लामो समय सुत्ने गर्छु । बिहान आठ बजे उठ्ने बित्तिकै फेसबुक खोले । तर सधैँझैँ फेसबुकमा रमाइला भिडियो, समाचार, गुड मर्निङ जस्ता जस्ता पोष्ट थिएनन् । त्यो दिन अपत्यारिलो र दुःखद खबर थियो । खेलकुद पत्रकार भएर होला खेलाडी र ...
किन फुटबल ‘मिस’ गर्दैछन् भरत खवास ? access_timeबैशाख १७, २०७९
समर्थकहरुको आवाज र राष्ट्रिय फुटबल टोलीको जर्सीमा पुनः मैदान फर्कने हुटहुटी उनको अनुहारमा छर्लङ्ग देखिन्छ । ‘राष्ट्रिय टोलीको जर्सीमा फर्किन मेहनत गरिरहेको छु । फेरि देशका लागि गोल गर्दै समर्थकहरुको गुन्जाहट सुन्न आतुर छु,’ फुटबल खेलाडी भरत खवास स्मरण गर्छन् ...